Izindandatho zokuzibandakanya kwabesifazane nabesilisa.
Amasiko wokubandakanya izindandatho ayahlukahluka ngokuya ngesikhathi, indawo namasiko. Indandatho yokuzibandakanya ibikade ingejwayelekile, futhi lapho isipho esinjalo siphiwa, ihlukaniswa nendandatho yomshado.
Ukubandakanyeka izindandatho kwabesifazane
Manenekazi, lalelani phezulu. Uphuphe ngosuku lwakho olukhethekile kusukela usemncane kakhulu. Ucabange indlela ogqoke ngayo, umcimbi, umdanso wokuqala; yonke imininingwane. Kepha, wake wama ukucabanga ngokuthi zingaki izindlela ezahlukahlukene zokubandakanya abesifazane ezikhona?
Usuku lwakho oluphelele, yebo, lubaluleke kakhulu. Kodwa-ke, indandatho yinto ozoyigqoka nsuku zonke impilo yakho yonke futhi ifanelwe ukuphelela.
Ukubandakanya izindandatho kwabesilisa
Uma abesifazane bengakwazi ukufaka izindandatho zokuzibandakanya ukumemezela isimo sabo, kungani amadoda engakwazi? Yebo, asikho ngempela isizathu. Njengoba imibhangqwana eminingi ikhetha ukuthi owesilisa afake ubufakazi besimo sabo futhi njengomphakathi wamukela kalula ubudlelwane bezingxabano.
I-rose yegolide, igolide elimhlophe, igolide eliphuzi, iplatinamu noma ipalladium?
Abasebenza ubucwebe banamuhla banokufinyelela ezinhlobonhlobo ezimangalisayo zensimbi ngemibala ehlukene. Ngenkathi izinketho ezinjenge-platinamu ne-palladium ziqala ukuthandwa kakhulu, igolide lihlala liyinto enhle ongayenza. Ukwafunda ngomehluko okhona phakathi kwegolide eliphuzi vs. izindandatho zegolide elimhlophe kuyindlela enhle yokunciphisa izinketho zakho lapho uthatha isinqumo sokuthi iyiphi insimbi oyikhethayo ubucwebe obumele uthando empilweni yakho.
Izindandatho zokubandakanya ezingabizi
Ungadonswa izindleko. Kunezinketho eziningi ezitholakalayo zezindandatho zokubandakanya ezingabizi. Vele, okushiwo ukuthi “okungabizi” kunengqondo kakhulu. Kodwa ngenkathi izabelomali zingahluka, wonke umuntu unazo.
I-Round solitaire, i-oval, i-emerald, i-pearl noma inkosazana yasika amadayimane, inhlanganisela yezitayela, bobunjwa nokubukeka akunamkhawulo ngempela.
Ngamunye wama-C amane (Carat Weight, Cut, Colour, Clarity) ahambisana neshadi ledayimane elikhombisa umehluko phakathi kwamabanga. Ngemuva kokufunda kabanzi, uma udinga ukubona idayimane mathupha, vakashela isitolo sakho sezinto zokuhloba. Thola umuzwa ongcono wokuthi yini oyazisa wena ngedayimane.
Izindandatho zokuzibandakanya ze-Gemstone ziyisinqumo esiphelele salokho okuhlukile, ukubukeka kwendabuko okuncane okuncane ngombala kanye nesitayela. Ifana nezindandatho ezimbalwa eziphefumulelwe ngama-vintage, izindandatho zamatshe ayigugu zenziwe ngamatshe ayigugu, kusuka emeraldi kanye namarubhu kuya kumassafini, ama-morganites, opals… Ngokuvamile kuklanywe ngegugu njengetshe eliphakathi nendawo lapho lizungezwe amadayimane amancane noma amatshe angenamibala.
Kuyo yonke le minyaka bekukhona abakhiqizi bezindandatho eziningi zokuzibandakanya, njengoTiffany, Cartier noHarry Winston, omkhiqizo wabo baye bafana ngokunethezeka nangokweqile. Ukuziqhakambisa amadayimane angavamile futhi ahlukile futhi ukuhlotshaniswa namakhasimende acebile futhi adumile kuvame ukunikeza abaqambi bendandatho yokuzibandakanya udumo nodumo olungafani nalutho. Kuyaziwa kabanzi emhlabeni wobucwebecwebe ukuthi umqambi namagama omhlobiso wobucwebe ngokuvamile abiza kakhulu.
Abaqambi bethu bangakwazi ukudalela wena idizayini. Ngezinketho eziningi kakhulu, uqinisekile ukuthola indandatho enhle yomzuzu wakho ophelele.